ဘာမြူဒါတြိဂံ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူတွေသိပ်မသိကြသေးတဲ့ ထူးဆန်းဖွယ် ကိစ္စရပ်အချို့ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingဘာမြူဒါတြိဂံ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူတွေသိပ်မသိကြသေးတဲ့ ထူးဆန်းဖွယ် ကိစ္စရပ်အချို့
September 23, 2021 Yan Amazing, Knowledge 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါ ပြောပြပေးမှာကတော့ ဘာမြူဒါတြိဂံ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူတွေသိပ်မသိကြသေးတဲ့ ထူးဆန်းဖွယ် အချက်တွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထူးဆန်းမှုတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဒီ ဘာမြူဒါ တြိဂံ တစ်ဝိုက်ထဲမှာ ဘယ်လို အချက်တွေ ရှိမလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ ဘာမြူဒါ မီးတီကောင်
ပထမဦးဆုံး ပြောပြပေးချင်တာကတော့ ဘာမြူဒါ မီးတီကောင်တွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘာမြူဒါ မီးတီကောင်တွေ ဟာဆိုရင် ( ၄ ) စင်တီမီတာ အရှည်ရှိပြီး အနီရောင် ရှိကာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ကို သွားပြီးထိလိုက်မယ်ဆိုရင် အမွှေးအမျှင်လေးတွေ နဲ့ ဖုံးတတ်ကြပါတယ် ။ နောက်ထပ် ထူးခြားချက်တဲ့ အချက်ကတော့ မေလ နဲ့ နိုဝင်ဘာလ ကြား လပြည့်ပြီး တတိယမြောက်ညမှာ မီး တီကောင် အမတွေဟာ တီကောင် အထီးတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ချွဲပျစ်တွေ အရည် အရောင် တောက်တောက်တွေ ထုတ်လွှတ်တတ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ မြူအမြဲဆိုင်းနေခြင်း
ဘာမြူဒါ တြိဂံရဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ နေရာတွေကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မြူတွေ အမြဲဆိုင်းနေတာကို တွေ့ရမှာပါ ။ လူတော်တော် များများ ကတော့ အခုလိုမျိုး မြူတွေဆိုင်းနေတာဟာ ဘာမြူဒါတြိဂံရဲ့ သဘာ၀လွန်စွမ်းအားတွေ ကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး ယုံကြည်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ (၁၉၇၀ ) ခုနှစ်တွေတုန်းက လေယာဉ်မှုး တစ်ယောက်ဟာ ဘာမြူဒါတြိဂံနားကနေ ဖြတ်သွားရင်း စက်ဝိုင်းပုံစံရှိတဲ့ မြူခိုးတွေကို ပါတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ သူဟာ စူးစမ်းချင်တာနဲ့ စက်ဝိုင်းပုံစံ မြူခိုးထဲကို ဖြတ်ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်အတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို ကြေးနန်းနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ဖို့ စတင်ခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
နောက်ပိုင်း ထိုလေယာဉ်မှုးဟာ အနီးနားက မိုင်ယာမီ လေကြောင်းစင်တာကို ဆက်သွယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ သူပျံသန်းနေတဲ့ ဧရိယာ နားမှာ ဘာလေယာဉ်မှ မတွေ့ရဘူးလို့ အကြောင်းပြန်တာကို ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ လေယာဉ်မှုးရဲ့ ပြန်ပြီး ပြောပြချက်အရ မြူခိုး စက်ဝိုင်းထဲကို ဝင်သွားတဲ့အချိန်ဟာ တစ်ကယ်တမ်း က မိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲ ကြာခဲ့ပေမယ့် သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ နာရီဝက် ကျော် နီးပါးအထိ အချိန်ကြာတယ်လို့ ခံစားခဲ့ရပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ ကိုလံဘတ် တွေ့ခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းသောအရာ
နယ်မြေ စူးစမ်းရှာဖွေသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ခရစ်စတိုဖာ ကိုလံဘတ်ဟာဆိုရင် ကမ္ဘာသစ်ကို ရှာဖွေဖို့အတွက် ဘာမြူဒါတြိဂံကို ဖြတ်သန်းပြီး သွားရတဲ့ ခရီးစဉ် တစ်ခုရှိပါတယ် ။ ဒီခရီးစဉ်မှာ ကိုလံဘတ် ဟာ သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို စာအုပ်ထဲရေးပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ် ။ မှတ်တမ်းထဲမှာ ရေးထားချက်အရ ဘာမြူဒါတြိဂံ နားရောက်တဲ့ အခါ ကောင်းကင်ပေါ်က ထူးဆန်းတဲ့ အလင်းရောင် တစ်ခုကို တွေ့ခဲ့ရပြီး အလွန်ကြီးမားတဲ့ မီးလျှံကြီး လို့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ကိုလံဘတ်ဟာ ကောင်းကင်ပေါ်က ဥက္ကာခဲ တစ်ခု သမုဒ္ဒရာထဲ ကျသွားတာကို မြင်ပြီး ဒီလိုမျိုးရေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အချေအတင် ငြင်းခုံခဲ့ကြပါတယ် ။ တစ်ချို့သော ပညာရှင်တွေ ရဲ့ ပြောပြချက်အရ ကိုလံဘတ် ရဲ့ သံလိုက်အိမ်မြှောင်ဟာလည်း ထိုအချိန်တုန်းက ထူးဆန်းစွာ အလုပ် လုပ်နေတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ သူ့ရဲ့ မှတ်တမ်းထဲမှာ ပါဝင်သေးတယ်လို့ ပြောပြထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ ရှိတ်စပီးယားရဲ့ The Tempest ပြဇာတ်
လူတော်တော်များများ ကတော့ ရှိတ်စပီးယား ရေးခဲ့တဲ့ The Tempest ပြဇာတ်ဟာ ဘာမြူဒါတြိဂံ အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုကို အခြေခံပြီး ရေးထားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ် ။ ရှိတ်စပီးယား ဟာ ထိုပြဇာတ်ကို ရေးနေတဲ့ အချိန်တုန်းကဆိုရင် ဘာမြူဒါတြိဂံ အကြောင်းကို အခုလိုမျိုး လူသိပ်မသိကြသေးပါဘူး ။ shwekhitonlinetv.com
The Tempest ပြဇာတ်ဟာ ( ၁၆၀၉ ) ခုနှစ်တုန်းက နစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့ သင်္ဘောတစ်စင်းကို အခြေခံပြီး ရေးထားတဲ့ ပြဇာတ်တစ်ခုပါ ။ သင်္ဘောဟာ ဖလော်ရီဒါ နဲ့ ဘာမြူဒါကြားမှာ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ မုန်တိုင်းတစ်ခု ကြောင့် နစ်မြုပ်သွားခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ သင်္ဘော နစ်မြုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ အလျင်အမြန် ပျံ့နှံ့သွားပြီး အခုလို နစ်မြုပ်သွားရတဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေ ရှိတယ်လို့ ပြောခဲ့ကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ ဘာမြူဒါတြိဂံရဲ့ အရွယ်အစား
တစ်ချို့သော သူတွေကတော့ ဘာမြူဒါတြိဂံရဲ့ အရွယ်အစားဟာ သေးငယ်တဲ့ အမှတ် ( ၃ ) ခုကို ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ တြိဂံ အသေးတစ်ခုလို့ပဲ ထင်ကြမှာပါ ။ တစ်ကယ့် အပြင်မှာတော့ ဘာမြူဒါတြိဂံ ဟာ လူတွေ ထင်ထားတာထက်ကို ပိုပြီး ကြီးနေပါသေးတယ် ။ wonderopolis မှာ ဖော်ပြထားချက်အရ ဘာမြူဒါတြိဂံရဲ့ စုစုပေါင်း အရွယ်အစားဟာ သမုဒ္ဒရာအတွင်းက စတုရန်း မိုင်ပေါင်း ( ၄၄၀ ၀၀၀ ) ကနေ ( ၁ ၅၁၀ ၀၀၀ ) အထိ ရှိနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွင်း ဘာမြူဒါ တြိဂံရဲ့ အရွယ်အစားဟာ ပြောင်းလဲနေတာကြောင့် သူ့ရဲ့ တစ်ကယ့် အရွယ်အစားကို ပြောပြဖို့ ခက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခု ဖော်ပြပေးထားတာကတော့ ဘာမြူဒါတြိဂံ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူတွေသိပ်မသိကြသေးတဲ့ ထူးဆန်းဖွယ် ကိစ္စရပ်အချို့ကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ပြောပြပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါအုန်းနော် …. shwekhitonlinetv.com
မြင်ရခဲပြီး အပြင််မှာ တစ်ကယ်ရှိတဲ့ ဧရာမ အင်းဆက် (၁၀) မျိုး